Njem ịga Rome na ụmụaka | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Rome, Iso umuaka eme njem
Taa, ezinụlọ ndị na-eto eto na-eso ụmụ ha eme njem, ọtụtụ na-echekwa na ọ dịghị ebe n'ụwa a na-apụghị ileta ha. Ọ bụ ya n'ezie? Enwere m obi abụọ, mana m na-eche na ụfọdụ ebe aga dị mma karịa ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, Nwere ike ịga njem iji Rome na ụmụaka?
Azịza ya bụ ee, ọ bụ ezie na ị ga-anọdụ ala hụ ihe obodo ahụ na-enye ha n'ihi na ha chọrọ ịmata, ọ bụ eziokwu, mana akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ nka nwere ike ọ gaghị amasị ha nke ukwuu. Plankwado. Nke ahụ bụ okwu mgbe ọ na-abịa njem na umuaka.
Rome na ụmụaka
Rome bụ otu n’ime isi obodo ukwu nke Europe ma nwee ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite nke dị n'akụkụ ọ bụla. Onye na-ahụ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ihe ebube dị ebube na-agagharị n'obodo a, mana gịnị banyere ụmụntakịrị?
Anyị kwuru n'elu na ị ga-akpọọ nkụ na ọ bụ otu ahụ. Domụaka anaghị enwe mmasị n'ahịrị dị ogologo ma ọ bụ ichere ya ka ọ dị mma zụta tiketi n'ọdịnihu iji zere ogologo oge ọ bụla. Ihe mbụ, mgbe ahụ, bụ mara ihe omuma. Tiketi dị na ntanetị, mana ọ bụrụ na ịnweghị ha, ọnụ ụzọ ndịda nke Forum ma ọ bụ Palatine Hill nwere mmadụ ole na ole ka ị wee nwee ike irite uru ma zụta ya ebe a.
Enwere ọtụtụ ụdị nke njegharị eduzis na ị nwere ike ịhọrọ njem ụdị ezinụlọ nke Colosseum na Forum. Mkpọmkpọ ebe ahụ anaghị emechu ihu, ma ya fọdụzie Colosseum ahụ na ịdị ukwuu ya. Ha ga-ahụ ya n'anya! Karịsịa ma ọ bụrụ na njem ahụ na-akpọrọ ha n'okpuru ala ma ọ bụ n'akụkụ dị elu ebe echiche dị mma.
Anyị ekwughị ya mana na Colosseum, na Forum na Palatine Hill niile nwere otu tiketi ya mere nleta na-aga n'ihu ebe a, yana ọtụtụ mkpọmkpọ ebe. Ọ bụrụ na ọ bụ anwụ na-acha n’ụtụtụ, ọ na-anọ n’èzí, mara mma. Ime nleta atọ ahụ n’usoro nwere ike ịgwụ ike yabụ na ọ bara uru ka ha rie nri ehihie n’etiti ha ka ụmụaka nwee ike zuo ike.
The Colosseum bụ nnọọ zuru ezu ma Forum bụ nnọọ ahazi nke mkpọmkpọ ebe na-emeghe ka pụrụ ichetụ n'echiche. Ezigbo echiche bụ igosi ha tupu ị na-agagharị ihe Nzukọ ahụ dị ka ọtụtụ narị afọ gara aga ma ọ bụ ibudata ihe oyiyi ahụ na mkpanaka gị iji nwee ike igwu ma tulee. Ọgwụgwụ kachasị mma nke nleta ugboro atọ a bụ imecha na elu nke Palatine Hill nke ị nwere nnukwu echiche nke saịtị abụọ ndị ọzọ.
N'etiti Colosseum na Vittorio Emmanuel Ncheta e nwere a obosara na ogologo n'okporo ámá. Ije ije ebe a ị ga - ahụ mkpọmkpọ ebe nke Ahịa Trajan nke ewuru gburugburu 100 AD na ebe gburugburu ụlọ ahịa na ọfịs 150. Ọ bụ saịtị kwesịrị ịbụ ihe a ga-ahụ. Dị nso bụkwa Ihe nkiri Maximus.
Circus Maximus na-emebu chariot. Taa isi ihe omimi abanyela na mbara ala ma dị warara. N’enweghi obere echiche, mmadụ nwere ike ịmegharị agbụrụ ndị ahụ dị ebube ma na-eme mkpọtụ na ụdị Ben-Hur kachasị mma. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ a na-eme ihe omume na ebe a, yabụ ọ bụrụ na ọ bụ ya mere, ị nwere ike ịgagharị ma jegharịa.
Ọzọkwa nso bụ mkpọmkpọ ebe ọzọ: Athlọ mmiri nke Caracalla. Ha ga-abụrịrị okomoko ma ọ bụ naanị mgbidi ole na ole na-eguzo na ọdọ mmiri nke ọdọ mmiri ndị ahụ. Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ buru ibu ma ọ bụ naanị ije ije 15 site na Circus Maximus. N’ọnụ ụzọ, enwere ụlọ ebe a na-ere ice cream, ihe na-atọ ụtọ, yabụ ị nwere ike ịme “ebe ọrụ teknụzụ” ebe ụmụaka ga-enwe ekele.
Igwe ịsa ahụ ndị a dị adị bụ nke Emperor Caracalla wuru na AD 217. Mgbe ọdịda Rome, n'ikpeazụ, ọwa mmiri nke butere mmiri ahụ mebiri, saịtị ahụ malitere ka ndị na-enweghị ebe obibi na-eme ihe na Middle Ages, ụfọdụ were okwute iji wuo ụlọ na, nke ọma, ọ dịrịla ruo taa. Ihe dị mma bụ na e nwere ihe ịrịba ama ebe niile na-akọ akụkọ a ka ị nwee ike iji ndidi gwa ụmụ gị.
Ke adianade do, na-adịbeghị anya ẹkenam a ezigbo eme njem. Njegharị ahụ bụ ọhụụ ọdịyo ma ị nwere ike ịhụ ihe ụlọ ịsa ahụ dị ka nke kachasị mma. Nke a agaghị echefu echefu maka nwatakịrị, ị cheghị?
Echere m na n'ụzọ bụ isi na ebe ndị a Rome oge ochie maka ụmụaka kpuchie. Ọ bụrụ na ịnwekwu oge, ịnwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma gaa maka ịgagharị na Appian Way ma ọ bụ gaa na ụlọ ndị mara mma nke alaeze ukwu, mana yana obere oge ma ọ bụ ụmụaka nwere enweghị mmasị na ndị Rom ochie, nke a zuru. Ugbu a, ị ga-aga n'ihu Christian Rome na ebe a ọzọ enwere ọtụtụ ihe ị ga - ahụ wee họrọ.
Pụrụ ịmalite na Vatican nke bu obi Katoliki. Nwere ike ịga na square wee gafere ụlọ ahịa gbara ya gburugburu ma ọ bụ ịnwere ike ịga n'ihu na gaa na Vatican Museums. Lee akụ ndị sitere n'akụkụ ụwa niile ma ama ama Lọ ụka Sistine. Mmadụ nwere ike ịga ije ọtụtụ awa ma mata ihe niile, ọ bụ eziokwu, mana ọ bụghị echiche ọjọọ ịzụta tiketi na kwụ n'ahịrị. Enwere njegharị maka ụmụaka.
La St. Peter's Basilica Ọ nwere ike imechi nleta Vatican na foto nwere Switzerland Nche nwere ike ịbụ ihe ncheta kachasị mma. Ọ bụrụ na ụmụaka nwere ume ị nwere ike ịrịgo elu ụka dome wee lelee Rome. Ihe ọzọ agaghị echefu echefu.
Ma ọ bụ tupu ma ọ bụ mgbe Vatican ị nwere ike ịgakwuru ndị Castel Sant'Angelo. N’ebe ụzọ mbata ahụ, e nwere àkwà mmiri a kpụrụ n’elu ihe a kpụrụ akpụ. Castlọ a bụbu ebe ewusiri ike papal ma nwee oghere nzuzo na-ejikọ ya na Vatican. Taa ụlọ ihe ngosi nka na-arụ ọrụ, ọ nwekwara mbara ala mepere emepe iji nwee nnukwu echiche banyere ihe niile. Ma gịnị banyere Pantheon? N'ebe a Rome oge ochie na-ezute Christian Rome.
Ọ bụ otu n'ime ụlọ Roman oge gboo kachasị echekwa ma laghachi na 120 AD. Ime dị ebube na ìhè anyanwụ ma ọ bụ mmiri ozuzo site na oghere dị n'elu ụlọ, ma ọ bụrụ na ị nweghi ihu ọma na mmiri zoro n'ụbọchị ị gara. Nke a bụ Rafael ya mere ị ga-eji chọọ ma chọta ili ya tupu ị pụọ. N'ikpeazụ, n'èzí enwere ọtụtụ ebe iri nri ma ọ bụ ị drinkụ ihe ọ bụla yabụ ọ bụ ebe ọzọ dị mma izu ike.
O doro anya Rome bụ obodo jupụtara na chọọchị. Ọ bụrụ na achọpụtara m ihe, ọ bụ na ha niile mara mma ma ọtụtụ nweere onwe ha na amaghị. Na nso ogbako enwere uka abua mara nma ma mara nma, ma oburu na ichoro ihe kariri ndi ozo Santa Maria Maggiore na ihe eji eme ihe mosaic nke na ewepu iku ume gi na ozo ozo nke puru iche bu ihe di obere Chọọchị Santa Maria na Cosmedin.
Nke a bụ ebe enwere ama nke Eziokwu, tupu e wuo ụlọ ụka ahụ n’onwe ya. Nwere ike ịchọta ya n'akụkụ Circus Maximus, na Plaza de la Boca de la Verdad. Ọ bụrụ na ụmụ gị nwere mmasị na ya macabre A crypt ga-abụ na ndepụta nke ihe ịga leta na ụmụaka na Rome. Nwere ike ịhọrọ Crypt nke ndị mọnk Cappuccinos, saịtị nwere ọnụ ụlọ isii nke ọkpụkpụ jupụtara na ụfọdụ foduru nke yiri ka ozu.
La Obodo Borghese na ubi ya, Isi iyi Trevi na ụfọdụ njem mmụta na mpụga nwere ike ịgụnye. ostia oge ochie, las Pompeii mkpọmkpọ ebe ma ọ bụ n'ihu, Florencia, nọ nso.
Echere m atụmatụ dị mkpa mgbe gị na ụmụaka na-eme njem Ọfọn, ị nwere ike ịhazi ezumike kacha mma nke ndụ ha site n’inye ha ahụmịhe. Ọ bụghị naanị ịga ije ma ọ bụ ịhụ ụzọ, kama ịme ime: ịgba ịnyịnya ígwè na Appian Way, igwu gladiator na Colosseum, ịdebanye aha maka pizza ma ọ bụ pasta ...
Agbanahụla iso ụmụaka eme njem. Ọ nwere ike ịdị jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Iso umuaka eme njem » Njem ịga Rome na ụmụaka